Ajụjụ ọnụ nke Steven Woods: Asụsụ Ahụ Isi | Martech Zone
Wednesday, October 28, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'ehihie ụnyaahụ enwere m obi ụtọ ịme nke mbụ m Podcast Voice Google na Steven Woods, CTO nke Eloqua na onye edemede nke Asụsụ Ahụ Dijitalụ. Google Voice-enye gị ohere ka ịdekọ oku mbata gị (pịa 4 ka ịmalite ma kwụsị ndekọ) wee debe ha ozugbo na igbe mbata Google Voice gị. Echere m na nke a bụ ụzọ dị mma isi malite ịme ụda na saịtị ahụ!
M digress. M zutere Steven ma nwee ohere ịnọnyere ya na ya Nzukọ Ahịa n'ịntanetị. Ọ dị mma ịkọwa akwụkwọ ya, otu ahịa si gbalite na etu ndị ahịa na-esi agbanwe ihe okike gaa n'ụdị ụdị nyocha. Na N'ajụjụ ọnụ…
[ọdịyo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/podcast/steve-woods.mp3]
Ọ bụrụ na ịhụghị ọkpụkpọ ahụ, pịa site na post iji gee ntị na N'ajụjụ ọnụ Steven Woods gbara.
Ebumnuche dị n’azụ Asụsụ Digital bụ na ndị na-ere ahịa ga-ebido ịlele ntanetị mmegharị ahụ nke ndị na-azụ ahịa iji gwa ha okwu nke ọma. Anyị na-eme nke a site na mkparịta ụka kwa ụbọchị site na nkwukọrịta ihu na ihu. Anyị na-eburu ụzọ dị omimi nke ọma wee gbanwee etu anyị ga-esi na-agwa onye ahụ okwu. Agbanyeghị, emebeghị nke a n'ụzọ dị irè n'ịntanetị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anaghị ahụ otú ndị na-azụ ahịa na-abanye ma ọ bụ site na weebụsaịtị ha… ha na-aga n'ihu na-ezutu ma zie ozi izizi. Ọ bụ ezigbo ihe atụ!
Echere m na nke a ga-abụ nnukwu ohere idekọ kama idetu ihe na mkparịta ụka anyị. Enwere ọtụtụ ihe ngosi iji gụọ, mana Steve na-enye ụfọdụ mmalite dị egwu maka ndị na-ere ahịa n'oge na-agba ajụjụ ọnụ.
Tags: asụsụ dijitalụokwuosisi steven
Dave Morris kwuru
Ọkt 28, 2009 na 3:17 PM
Ezigbo ajụjụ ọnụ